I-Brilinta vs. Plavix: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Izindaba Inkampani, The Checkout Izilwane Ezifuywayo Imidlalo Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Ezemidlalo Ezisindayo Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Brilinta vs. Plavix: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Brilinta vs. Plavix: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Brilinta (ticagrelor) ne-Plavix (i-clopidogrel) yizindlela ezimbili zokwelashwa ezivimbela ukwakheka kwamahlule egazi. Kubantu abane-acon coronary syndrome (i-ACS) noma umlando we-myocardial infarction (MI, noma isifo senhliziyo), amahlule egazi angahlangana futhi avimbele ukugeleza kwegazi. Imithi efana neBrilinta noma iPlavix ingaqinisekisa ukugeleza kwegazi okwanele okuzungeze inhliziyo ukusiza ukuvimbela isifo senhliziyo noma isifo sohlangothi.
UBrilinta noPlavix bayingxenye yeqembu lemithi ebizwa ngokuthi ama-antiplatelet agents , izinciphisi zegazi, noma ama-P2Y12 inhibitors. Zombili lezi zidakamizwa zisebenza njengabaphikisi be-receptor, okusho ukuthi zivimba i-P2Y12 receptor ebhekele ukukhuthaza ama-platelet namahlule egazi. Le mithi ivame ukuphuzwa nsuku zonke okungenani unyaka ngemuva komcimbi we-ACS.
Ngenkathi i-Brilinta yaziwa njengesidakamizwa esisebenza kangcono ezimweni eziningi, yomibili imishanguzo inomehluko obalulekile emiphumeleni emibi nakwisikali.
Yini umehluko omkhulu phakathi kweBrilinta ne-Plavix?
I-Brilinta (Yini i-Brilinta?) Igama lomkhiqizo le-ticagrelor. Yize inguqulo ejwayelekile ivunyelwe, ayikatholakali ngokuthengisa. Ngakho-ke, lo muthi ungabiza kakhulu kunePlavix noma amanye ama-ejenti afanayo afana ne-Effient (prasugrel).
Ngokwe-American Heart Association (AHA) ne-American College of Cardiology (ACC), uBrilinta uyi- ukwelashwa okuncanyelwayo kubantu abane-ACS. I-Brilinta isebenza ngokushesha futhi inemodi yesenzo eguqukayo. Ibuye ibe nokuvinjelwa kweplatelet okungcono nemiphumela yesiguli ngokuqhathaniswa nePlavix.
I-Brilinta ithathwa njengephilisi lezinsuku ezimbili kanye ne-aspirin yansuku zonke.
I-Plavix (Yini iPlavix?) Igama lomkhiqizo le-clopidogrel. Ngokungafani noBrilinta, iPlavix okwamanje itholakala njengomuthi ojwayelekile. I-generic Plavix imvamisa iyindlela eshibhile njengokuncipha kwegazi.
I-plavix ithathwa njengephilisi elivela kanye. Kuthathwa futhi nge-aspirin ukuqhubeka nokunciphisa ubungozi bemicimbi ye-ACS.
Abanye abantu bangabhekwa njengama-metabolizers ampofu wePlavix ngenxa yokwehluka kofuzo kuma-enzyme athile wesibindi. Labo I-CYP2C19 metabolizers empofu ayikwazi ukucubungula i-Plavix ngempumelelo futhi ingadinga ukusebenzisa ukwelashwa okuhlukile.
Umehluko omkhulu phakathi kweBrilinta ne-Plavix
Isigaba sezidakamizwa I-Antiplatelet
P2Y12 inhibitor I-Antiplatelet
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Igama lomkhiqizo kuphela Uhlobo lomkhiqizo nohlobo olujwayelekile luyatholakala
Ngubani igama elijwayelekile? I-Ticagrelor I-Clopidogrel
Ungena ngaluphi uhlobo umuthi? Ithebhulethi yomlomo Ithebhulethi yomlomo
Uyini umthamo ojwayelekile? I-Acute coronary syndrome (i-ACS):
Umthamo wokuqala wokulayisha we-180 mg. Ngemuva kwalokho, i-90 mg kabili nsuku zonke ngonyaka wokuqala ngemuva komcimbi we-ACS. Ngemuva kwalokho, i-60 mg kabili nsuku zonke ngemuva kwalokho. I-Acute coronary syndrome (i-ACS):
Umthamo wokuqala wokulayisha we-300 mg. Ngemuva kwalokho, i-75 mg kanye ngosuku.
Yelashwa isikhathi esingakanani? Izinyanga eziyi-12 noma ngaphezulu Izinyanga eziyi-12 noma ngaphezulu
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Abantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu Abantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu
Ufuna intengo engcono ku-Brilinta?
Bhalisela izaziso zamanani eBrilinta bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Izimo ezelashwa yi-Brilinta ne-Plavix
Yomibili le mithi ivunyelwe yi-FDA ukunciphisa izinga lemicimbi yenhliziyo kubantu abane-ACS. Le micimbi ingafaka ukuhlaselwa yinhliziyo, isifo sohlangothi, i-angina engazinzile (ubuhlungu besifuba obudalwa yizinto ezingaholela ekuhlaselweni yinhliziyo), nokunye izimo ezihlobene nenhliziyo .
Zombili lezi zidakamizwa zisiza ukuvimbela izinhlobo ezimbili zokuhlaselwa yinhliziyo: i-ST-elevation myocardial infarction (STEMI) kanye ne-non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI). ISITEMI senzeka lapho umthambo wenhliziyo uvinjwe ngokuphelele. I-NSTEMI ibangelwa ukuvimba okuncane noma ukuncipha komthambo wenhliziyo.
Yize zombili lezi zinhlobo zokuhlaselwa yinhliziyo zibucayi, i-STEMI izodinga ukuvuselelwa kabusha, noma ukubekwa kwe-a stent ukuvula umthambo. Ama-NSTEMI angavame ukwelashwa ngama-thinning agents, yize i-stent nayo iyadingeka ezimweni ezinzima.
Kukhona ingozi enkulu ye-stent thrombosis, noma amahlule egazi akha ngemuva kokubekwa kwe-stent, okwaziwa nangokuthi ukungenelela kwe-coronary okungenzeka. Ukuze uvikele i-thrombosis, i-Brilinta noma i-Plavix ingasetshenziselwa ukunciphisa ukuhlangana kweplatelet nokuvikela amahlule egazi azungeze i-stent.
Uma unikezwe i-Brilinta noma i-Plavix, cishe njalo uzobekwa i-aspirin yansuku zonke. I-Aspirin ithathwa ihlangene nale mithi ukuvimbela ukuqhubeka kwamahlule egazi. Inhlanganisela ye-aspirin ne-P2Y12 inhibitor ibizwa ukwelashwa okubili kwama-antiplatelet (DAPT).
Isimo Brilinta I-Plavix
I-Acute coronary syndrome (i-ACS) Yebo Yebo
Ukuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi (ukuvimbela) Yebo Yebo
Ingabe i-Brilinta noma i-Plavix isebenza kangcono?
UBrilinta noPlavix bobabili bakhonjiswe ukuthi bayasebenza ekunciphiseni ubungozi bezinkinga zenhliziyo ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi noma ezinye izehlakalo ezihlobene nezifo zenhliziyo. Kodwa-ke, ukuhlolwa kwemitholampilo kubonise ukuthi i-Brilinta isebenza kangcono kune-Plavix.
Ngokuya ngesifundo semitholampilo esingaboni kabili, esingahleliwe esibizwa nge- Isivivinyo se-PLATO , UBrilinta utholakale ukuthi wehlisa izinga lokufa kwenhliziyo uma kuqhathaniswa nePlavix. Ngemuva kwezinyanga eziyi-12 zokwelashwa, ukubulawa yizimbangela zemithambo yegazi, isifo senhliziyo, noma isifo sohlangothi kwenzeka ku-9.8% wezihloko ezithola i-ticagrelor kuqhathaniswa ne-11.7% yalabo abathola i-clopidogrel. Kodwa-ke, ngemuva kokubukeza amaphuzu okugcina okutadisha, abaphenyi be-PLATO bathole ukuthi kunezinga eliphakeme lemicimbi ethile yokopha eqenjini le-ticagrelor uma kuqhathaniswa neqembu le-clopidogrel.
TO ukuhlaziywa kwe-meta ukuthi bahlanganisile izifundo ezingaphezu kuka-10 zokwelapha ezibonisa ukuthi i-ticagrelor ne-clopidogrel zazifana nokusebenza nokuphepha. Kwakungekho mehluko obalulekile otholakele phakathi kwale mithi emibili. Labo abathatha i-ticagrelor batholwa ukuthi babhekana nokuphefumula okuningi uma kuqhathaniswa ne-clopidogrel.
Xhumana nodokotela wakho ukuthola ukuthi ngabe i-Brilinta noma i-Plavix iyindlela engcono kuwe.
Ufuna intengo engcono ku-Plavix?
Bhalisela izexwayiso zentengo ye-Plavix bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
ukwelapha kanjani ukutheleleka kwe-urinary tract ngokwemvelo
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zeBrilinta vs. Plavix
Kubantu abayiziguli zeMedicare Part D, uBrilinta uvame ukumbozwa. Izinhlelo eziningi zomshuwalense zizophinde zihlanganise uBrilinta. Kusukela ngo-2018, a uhlobo olujwayelekile weBrilinta uvunyelwe yi-FDA. Noma kunjalo, ayitholakali ngokuthengisa okwamanje. Izindleko ezijwayelekile zeBrilinta zingaphezu kwama- $ 500 ngamaphilisi angama-60 90 mg. Ukusebenzisa ikhadi lesaphulelo le-SingleCare kunganciphisa izindleko zibe ngaphansi kwama- $ 350.
Njengoba iPlavix iza njengomuthi ojwayelekile, ingatholwa ngentengo eshibhile. Iningi le-Medicare nezinhlelo zomshuwalense zizomboza lo muthi. Noma kunjalo, izindleko ezijwayelekile zokuthengisa zegama lomkhiqizo i-Plavix zingaphezu kwama- $ 200 ngamathebulethi angamashumi amathathu nama-75 mg. Ikhadi lesaphulelo le-Plavix SingleCare lingaletha izindleko ezijwayelekile ziye ku- $ 15 kuye ngekhemisi oyisebenzisayo.
Umthamo ojwayelekile Amaphilisi angama-90 mg (inani lama-60) Amaphilisi angama-75 mg (inani lama-30)
I-Medicare copay ejwayelekile $ 19– $ 423 $ 0– $ 19
Izindleko ze-SingleCare $ 350- $ 390 $ 15 +
Imiphumela emibi ejwayelekile yeBrilinta vs. Plavix
Umphumela ovame kakhulu we-Brilinta ne-Plavix ukuphuma kwegazi. Ukopha okuncane kungafaka ukulimazeka okulula, izinsini ezophayo, noma ukuphuma kwamakhala. Imicimbi emikhulu yokopha ifaka ukopha ngaphakathi, igazi emchameni noma esitulweni, nokuhlanza igazi. Kudingeka usizo lwezokwelapha ngokushesha uma uphuma kakhulu.
Eminye imiphumela emibi yeBrilinta ne-Plavix ifaka ukuphefumula okuncane (i-dyspnea), isiyezi, isicanucanu, nohudo.
Imiphumela emibi yokopha nokuphefumula okufushane kuvame ukuhambisana kakhulu neBrilinta kuqhathaniswa nePlavix. Ngokusho kwabanye izifundo zokuqhathanisa , UBrilinta wakhiqiza ukopha okuningi — kokubili imicimbi emincane nemikhulu — kunoPlavix.
Ngenhlanhla, i ikhambi kuye kwakhiwa ukuguqula imiphumela yeBrilinta ezimweni ezinzima zokopha. Njengoba iPlavix iyi-inhibitor engalungiseki, ayinayo ikhambi elithile lokuguqula imiphumela yayo.
Ukopha Yebo 7.7% Yebo 6.2%
Ukuphelelwa umoya Yebo 13.8% Yebo 7.8%
Isiyezi Yebo 4.5% Yebo 3.9%
Isicanucanu Yebo 4.3% Yebo 3.8%
Uhudo Yebo 3.3% Yebo 2.5%
Umthombo: DailyMed ( Brilinta ), IDailyMed ( I-Plavix )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kukaBrilinta noPlavix
Ama-opioid kanye ne-CYP3A4 inducers anciphisa imetabolism noma ukucutshungulwa kweBrilinta noma iPlavix emzimbeni. Lokhu kusebenzisana kungaholela emazingeni anciphile weBrilinta noma iPlavix, anganciphisa ukuthi asebenza kahle kangakanani.
I-CYP3A4 inhibitors kanye ne-CYP3A4 inducers kungashintsha amazinga egazi weBrilinta noma iPlavix. Ama-inhibitors e-CYP3A4 afaka ama-antifungal afana ne-ketoconazole nama-antibiotics afana ne-clarithromycin. Ama-inducers we-CYP3A4 afaka phakathi izidakamizwa ezinjenge-rifampin, i-phenytoin, ne-carbamazepine.
Izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala (ama-NSAID) kanye nama-anticoagulants afana ne-warfarin anezinto zokuncipha kwegazi. Ukuthatha lokhu ndawonye kungandisa ingozi yokopha.
UBrilinta angaxhumana nemithi ye-statin futhi akhuphule okuqhamuka uma udla imishanguzo . Yize i-Plavix ingaxhumana nama-statins, abukho ubufakazi obuqinile bokuthi iPlavix iphazamisa ukwelashwa kwe-statin. Empeleni, izifundo zikhombisile ukuthi ama-statins angasiza ekunciphiseni ukunciphisa ingozi yokufa kubantu abane-ACS.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa Brilinta I-Plavix
I-Ritonavir Ama-inducers we-CYP3A4 Yebo Yebo
I-Phenobarbital I-CYP3A4 inhibitors Yebo Yebo
Ibuprofen Ama-NSAID Yebo Yebo
I-Warfarin Ama-anticoagulants Yebo Yebo
I-Lovastatin Izitatimende Yebo Akunjalo
I-Digoxin I-glycoside yenhliziyo Yebo Akunjalo
Esomeprazole Ama-CYP2C19 inhibitors Akunjalo Yebo
I-Repaglinide I-Antidiabetic Akunjalo Yebo
Izexwayiso zikaBrilinta noPlavix
Bobabili uBrilinta noPlavix basengozini enkulu yokopha okuhlobene nokusetshenziswa kwabo. Ikakhulukazi uma ihlanganiswe nezinye izidakamizwa ezinciphisa igazi, uBrilinta noma iPlavix kungakhuphula ubungozi bokuphuma ngaphakathi, njengokuphuma kwegazi ngaphakathi noma ukuphuma kwegazi emathunjini. Ukusetshenziswa kwama-antiplatelet agents afana noBrilinta noPlavix kuyaxwayiswa uma unomlando owaziwayo wokopha noma izilonda.
I-Brilinta akufanele iqalwe ezigulini ezenza i- Umthambo wenhliziyo udlula ukuhlinzwa ngokuxhunyelelwa (CABG). Kodwa-ke, uma ukuphuma kwegazi kungalawulwa phakathi nale nqubo, kunganconywa ukuqhubeka nokwelashwa kweBrilinta.
I-Brilinta akufanele ithathwe ngemithamo ye-aspirin engaphezu kuka-100 mg. Izilinganiso eziphakeme ze-aspirin zinganciphisa ukuthi uBrilinta usebenza kanjani.
Abantu abanokukhubazeka kwezakhi zofuzo nama-enzyme wesibindi e-CYP2C19 bangathola ukusebenza okunciphisiwe nge-Plavix. Lokhu kungenxa yokuthi iPlavix icutshungulwa kakhulu yi-CYP2C19 enzyme. Uma kusolwa ukuthi uyi-CYP2C19 metabolizer empofu, ungathatha i- ukuhlolwa ukuthola. Unganconywa umuthi ohlukile uma umzimba wakho ungacubunguli i-Plavix ngokwanele.
Imibuzo ebuzwa njalo nge-Brilinta vs. Plavix
I-Brilinta ngumuthi kadokotela we-antiplatelet osetshenziselwa ukwelapha abantu abane-acute coronary syndrome (ACS). Eyaziwa nangokuthi igama layo elijwayelekile elithi ticagrelor, uBrilinta uthathwa kabili ngosuku ukuvimbela ukwakheka kwamahlule egazi. I-Brilinta yenziwe yi-AstraZeneca.
I-Plavix ngumuthi we-antiplatelet othathwa njengethebhulethi yansuku zonke yabantu abane-ACS. I-Plavix iyatholakala njengegama lomkhiqizo nenguqulo ejwayelekile. NjengoBrilinta namanye ama-P2Y12 inhibitors, iPlavix ithathwa nge-aspirin yansuku zonke. IPlavix yenziwa yiBristol-Myers Squibb kanye neSanofi Pharmaceuticals.
Ngabe uBrilinta noPlavix bayafana?
Cha. UBrilinta noPlavix abafani. Zilawulwa ngezindlela ezahlukahlukene futhi zinomehluko othile emiphumeleni emibi nasekuhlanganyeleni kwezidakamizwa.
Ngabe iBrilinta noma iPlavix ingcono?
I-Brilinta ithengisiwe futhi yafundwa njengesidakamizwa esisebenza kangcono kunePlavix. Kukhonjisiwe njengesidakamizwa esingcono ekwehliseni amazinga okufa kwenhliziyo nokuvikela isifo senhliziyo noma isifo sohlangothi. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi kube namathuba amaningi okuveza imiphumela emibi njengokuphuma kwegazi nokuphefumula okuncane. Ngokusekelwe ku Imihlahlandlela ye-AHA ne-ACC , I-Brilinta iyindlela yokwelashwa ekhethwayo kune-Plavix.
Ngingayisebenzisa yini i-Brilinta noma i-Plavix ngikhulelwe?
Nakhu idatha enganele ukukhombisa ukuthi uBrilinta noPlavix baphephe ngokuphelele ngesikhathi sokukhulelwa. Le mithi ayinconywa ngokuvamile ngaphandle kokuthi izinzuzo zayo zidlula izingozi. Khuluma nodokotela wakho ngezinketho zakho zokwelashwa ezitholakalayo ngenkathi ukhulelwe.
Ngingayisebenzisa yini iBrilinta noma iPlavix ngotshwala?
Kungcono ukugwema ukuphuza utshwala ngenkathi uthatha izinciphisi zegazi njengeBrilinta noma iPlavix. Lokhu kungenxa yokuthi notshwala bunakho izakhiwo zokuncipha kwegazi . Ukuphuza utshwala kungahlanganisa imiphumela yale mithi futhi kwandise nengozi yokopha okukhulu.
yi-naproxen sodium efanayo ne-ibuprofen
Ufanele uthathe isikhathi esingakanani ukuthatha i-Brilinta ngemuva kwe-stent?
I-Brilinta ithathwa nge okungenani izinyanga eziyi-12 ngemuva kokubekwa kwe-stent, okwaziwa nangokuthi ukungenelela kwe-coronary okungenzeka. Ngemuva kwezinyanga eziyi-12 zokuqala, uBrilinta kufanele athathwe izinyanga ezingeziwe eziyi-12 ngomthamo ophansi. Udokotela wakho uzohlola isimo sakho ekuvakasheleni kwakho okulandelayo ukuthola ukuthi kufanele uhlale isikhathi esingakanani eBrilinta.
Ungake uyeke ukuthatha uBrilinta?
Ukwelashwa nge-Brilinta kuvame ukubhekwa njengesikhathi eside. Udokotela wakho angafuna ukumisa i-Brilinta uma uyibekezelela kabi noma uhlangabezana nemiphumela emibi. Ukuyekiswa kweBrilinta maduze kungakhuphula ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma isifo sohlangothi uma une-ACS noma isifo semithambo yegazi.
Yikuphi okuphephile: iBrilinta noma iPlavix?
I-Brilinta ne-Plavix ngokuvamile ziyaqhathaniswa ngokuphepha nokusebenza kahle. Kodwa-ke, uBrilinta ukhonjisiwe ukuthi udale okuningi ukopha nokuphefumula okuncane uma kuqhathaniswa nePlavix. Zombili lezi zidakamizwa kufanele zigwenywe nezinye izinciphisi zegazi ukunciphisa ubungozi bemiphumela emibi.
Indlela yokuphatha — nokugwema — iso elibomvana ezinganeni
Kuyini ukuqinisekiswa kwemali?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-xanax iphele
ngingawuthola kuphi umkhuhlane wamahhala?
okungcono kadokotela imisipha relaxer for amajaqamba kokuya esikhathini
kuthatha malini ibuprofen ukweqisa izidakamizwa
kusho ukuthini ukuphuma ephaketheni max